देउवाले कांग्रेस सिध्याए ! खड्का किन पछि पछि ?
न्यूज अभियान ,काठमाडौं,२ माघ । देउवालाई कांग्रेस सिध्याएको आरोप लागेको छ । यसैले दोस्रो पुस्ताका कांग्रेसी नेताहरुले महासमिति र महाधिवेशनको माँग गरिरहेका छन् ।
आफूमाथि खनिएका युवाहरुमध्ये विश्वप्रकाश शर्मालाई प्रवक्ता बनाउने चालबाजी गरे पनि उनलेसमेत केन्द्रीय समिति, महासमिति र महाधिवेशन जाने मार्ग खुला छ भनेपछि देउवा तीनचित परेका छन् ।
यता गगन थापा, धनराज गुरुङ, चन्द्र भण्डारी, प्रकाशमान सिंह, रामशरण महत, अर्जुननर्र्सिंङ केसीलगायतका प्रभावशाली नेताहरु देउवाले कांग्रेस सिध्याए, देउवाका कमजोरीका कारण पार्टी लाजमर्दो स्थितिमा पुग्यो भन्ने आरोप लगाइरहदा त्यसको जवाफ फर्काउने ताकत सभापति देउवामा देखिएको छैन ।
असफल नेतृत्वका कारण चुनावमा पराजय भएको र यही नेतृत्व कायम राखे नेपाली कांग्रेस माथि उठ्न, बौरिन सक्दैन भन्ने विषयमा कांग्रेसभित्र एकमत देखिन थालेपछि देउवाको सातोजान थालेको छ । र, रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, सशांक कोइरालासमेत पार्टी नेतृत्व अव युवा पुस्ताको हातमा सुम्पिनुपर्ने माग गर्न थालेका छन् । यसैवीच तीन कोइराला शेखर, सुजाता र सशांकवीच पनि पार्टीको नेतृत्वबारेमा छलफल ग्रेक्का छन् ।
यसैवीच नेपाली कांग्रेसभित्र विशेष अधिवेशनको श्वर घन्किन थालेको छ । यस्तो श्वरमा श्वर प्रभावशाली कांग्रेसी नेताहरु भित्रभित्रै समर्थन गरिरहेका छन् भने वालकृष्ण खाँड एकजना देउवाले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने बेला भएको छैन भनेर सुगारटाई गरिरहेको सुनिन्छ । शेरबहादुर देउवाको राजनीति जोखिममा प¥यो ।
दउवाले अधिवेशनमा उपसभापति बनाउँछु भनेर बचन दिएका खुमबहादुर खड्का अहिले पनि देउवाका मूलथाम बनेर उभिएका छन् । जबकि उनलाई सिध्याउन कानुन बनाएर चुनावमा बाटो रोक्ने देउवा थिए । देउवाको त्यो मिसनमा साथ दिने केहि नेता थला परेकाछन् । उनीहरुलाई टाउको उठाउन लाज गराइदिएको छ गएको निर्वाचनले ।
चुनावमा उमेदवारको सूची बनाउने केही अधिकार दिएर थुमथुम्याए । खुमबहादुरहरुलाई साक्षी राखेर टिकटमा आरजु, बालकृष्ण खाँड र प्रकासशरण महतहरुले तर मारे । तर पनि देउवाको तोक्मा बनेर किन खडा छन्, धेरै कांग्रेसीको प्रश्न छ ।
खुमबहादुरका निकट स्रोत भन्छ– खुमबहादुर हिन्दुराष्ट्र अभियानमा छन्, उनले नै पूर्वराजालाई योगी आदित्यनाथसम्म पु¥याए । उनी वीपीका भक्त हुन् र वीपी नीतिबाट नेपाली कांग्रेस फेरि सशक्त हुनसक्छ भन्ने विश्वास राख्छन् । त्यही विश्वासमा शेरबहादुर देउवालाई ढाल्न सकिन्छ भनेर अथक परिश्रम भइरहेको छ । देउवाले कांग्रेस सिध्याए ! पौडेलले खुलेरै भन्दै आएकाछन् ।
त्यसो त रामचन्द्र पौडेलको अविश्वासको राजनीतिले पनि कांग्रेस अरु कमजोर बनेको खड्का समुहको बुझाई रहेको छ । हुन पनि नेपाली कांग्रेसको लागि खुमबहादुर खड्काले भनेझैं मृतसञ्जिवनी बुटी भनेको गिरिजादेखि भड्किएको कांग्रेसको चाललाई वीपीनीतिको लिकमा राख्न सक्नु नै हो ।
यदि हिन्दुराष्ट्र भयो र राजावादीलाई यथास्थान दिलाएर अघि बढ्न सकेको खण्डमा नेपाली कांग्रेस फेरि नेपालको एकनम्बर प्रजातान्त्रिक राजनीति हाँक्ने पार्टी हुनसक्ने आधार कायम छन् । त्यही आधार खडा गर्न खुमबहादुर देउवासँग टाँस्सिएर बसेका हुन् ।
यद्यपि युवा कांग्रेसीहरुले खुमबहादुर खड्कालाई देउवाको नीति त्यागेर युवा नेतृत्वको गाइडलाइन बनेर आउन भित्रभित्रै आग्रह गरिरहेको पनि सुनिन्छ । यसैवी खुमबहादुरर सशांकवीच कुरा भएको छ, त्यो अर्थपूर्ण कुराकानी हो भनिदैछ । न्यूज अभियानका लागि गोरखा एक्सप्रेसका साथमा ।